Dir Era: 26/10/2005
Dadka ku qawlaysta magaca Dirta waqooyi ee DFKGS
Waxaa wax lala yaaba ah in shakhsiyaadka fara kutiriska ah ee ku jira Dawlada Geedi ay ku andacoodaan, Jagooyinkana ku heleen inay matalaan Dirta waqooyi.
Waxaan doonayaa bal arintaa inaan si yar oo kooban wax uga idhaahdo. Shakhsiyaadkan horta waa shaqo tag ee cid ay matalaan iyo beelo ay wax u raadinayaan ma jirto,waa afartaa mutaxan ee aan cid kaloo ka dabasota lahayn,taageerana aan haysan.
Waxaa intaa u sii dheer iyagoo dulmiyay dad wallaalahood ah,waxaan u jeedaa Dirta koonfur,tacadigii iyo dhibaatadii loo geystay beelahaas koonfurta weynu wada oganahay in ilaa hadadan meelaha qaar weli lagu amarku taagleeyo oo kolba ninkii waalan ee dhiigyo cab ahi sida Indhacade oo kale uu sida naxariis darada ah ula dhaqmayo degaamo dhan(waxaan leeyahay Indhacade kow hadaanad ka deyn dadkan waxaad ku hayso waxaa hubaal ah inaanad ka badbaadin tolkood waa balan taasi).
Hadaba tuugadan dirta waqooyi sheeganaysa maxay saamigoodii soomaali ugala xisaabtami weyday ee xitaa ay 50% ugala ambaqaadi waayeen shirarkii wax lagu qeybsanayay waa yaab!!! waar nimanku hanyaraa ma waqooyi oo dhan bay ka dhigeen in beelaha dirta koonfureed 61-kii kursi ee ay lahaayeen ku qabsadaan oo khasab ku jujuubaan,waa budhcadnimo kale oo ka daran tan Indhacade ku hayo,waxaa maangaabnimo ah,nin markii uu cadkiisii soo dhacsan waayay wallaalkiis oo ka sii tabar yar badh ka rita.
Hadaba waxaan uga digayaa shacabka Soomaaliyeed inaanay ku dagmin khiyaamada ay wataan nimankaasi oo hadafka ay leeyihiin ay tahay:-
1- Burburinta iyo wiiqida DFKGS iyagoo doonayaa inay weligeedba sidaa ay Somaliya ku suguntahay ahaato iyagoo
Huuhaadaa wax ku hela sheeganayana maqacaa, shirkii walba ee layskugu yimaado si Somaali Dawlad loogu soo
dhiso waayo, waxaa hubaal ah in haddii ay DFKGS cagaha isku taagto ay fududahay in Somaliweyna la helo.
2- Waxaa loo kiraystay oo ay fulinayaan ulajeedo lagu dulmiyayo,looganana sadbursanayo dad wallaalahooda(Dirta
Koonfur),somaalidu waxay tidhaa "Nin soori kaa qaaday ,waa nin seefi kaa qaaday".
3- Waxay qaar badan oo iyaga ka mid ahi soo galeen dambiyo waaweeyn,mood iyo noolba ah,sidaa awgeed iyagoon
ku dhex noolaan karin dadkoodii,waxay gabood iyo dhufays ka dhigteen Dir waqooyi.
4- Waxaa ku jira qaar badan oo Basaasiin u ah niman siyaasiyiin ah oo Somaliland jooga,isla markaana aan jecleyn
Deganaanshaha koonfur,una soo wakiishay kharbudaada koonfur.
5- Waxaa ku jira niman u shaqeeya Dawlado shisheeya,kuwaas oo ku lacag qaata qaska Somali laga dhex wado.
Hadaba waxaa fiican in fiiro gaar ah loo yeesho Dawlad iyo shacab ahaanba,dadka noocaas ah ee kala dilaya umada Soomaaliyeed,waxaana haboon in laga soo caydhiyo meesha oo xilalkii ay hayeen lagu bedalo dadkii xaqa u lahaa (Beelaha Dirta Koonfur),ka dibna ha loo wada hadlo Somaliland vs Somalia. Haddii kale sida ay jecelyihiin warxumaa tashiilku (Dir Waqooyi vs Somalia).
Waxaa kale oo aan u sheegayaa dadka soo qora war saxaafadeedyo badan oo weliba u badan kuwa Daaroodka,hadaad is leedihiin Dir waqooyi waa cay ,been baad isu sheegaysaan ee isaaq waa Dir,laakiin waxaa is weydiin leh adigu maxaad ka helaysaa. Sidaynu wada ogsoonahay Somalibadan oo cidwalba leh ayaa inagaga maqan Dawladaha jaarka ,ee marka loo xisaabtamo Somalida 7-ka gudihiisa ku jirta,yaan lagaa waayin waxaad kaga hor tagi lahayd Dirr waqooyi+Dirr koonfur,ileyn xisaab iyo nin tirsi baa imane.
Waxaan hadalkii ku soo koobay, Dirr miyaa Daarood leeg? jawaabteeda dadweynahaan u deyn iyo maqaalada kale ee soo socda oo runtii aan kaga hadli doono,Nimankaas dulinka ah ee ku ceesha magaca Dirr waqooyi oo taariikhdooda iyo shakhsiyadooda aan kaga hadli doono.
Ahmed yabaal: Hargeysa
# posted by Dir Era @ 3:45 AM 1 comments
Jawaab: MA XAQBAA 4.5-KA AY SOOMALIDU WAX KU QAYBSATAY?
Waa salaaman tihiin dhamaan maamulka shabakadan warsid,
Walaal Ahmed Yabaal salaan sare ayaad salaaman tahay marka hore, Ramadaan Kariim !!!
Arrinta waa sidaad ugu hadashay ee walaalahayaga waqooyi inaan garab ka helno mooye maanan is laheen xaqiina ayey qaadan oo leydiin adeegsan sidii loo yareyn lahaa awooda ay Dirta koonfur ku yeelan laheyd siyaasada koonfurta Soomaaliya.
Qolyahan ku socda magaca Dir Waqooyi ee inoogu yimid shirka Kenya waxaa isaga qaldan labo arrin;
1. Mid ah miisaaniyada siyaasadeed oo ay beesha reer isxaaq ku leedahay soomaliya taasoo ah mid aanan murun geli
karin haddii ay Isaaq oo mid ah ay la xisaabtami soomaali koonfur.
2. Iyo midan hadda ka socota koonfurta Soomaaliya oo ah sidii loogu dhisi lahaa xukun iyo nidaam dowli halka u
baahan: oo ah Koonfurta Soomaaliya. Waqooyi nidaam dowli, nabad, iyo kala danbeyn wey hestaan oo ay
heleen mar hore, aqoonsiga u dhimana wuu imaan dhawaan Insha Allaah.
Haddii aan sii gudo galo mida koowaad ee ah miisaaniyada beesha Isaaq, dee Isaaq haddii ay la gor gortami soomaali waxay ula xisaabtami sida Waqooyi iyo Koonfur oo haddii ay wax isku darsan ay qaadan 50%, haddii kalena dee iyagaaba dowlad ah, nidaam iyo kala danbeyna heysta oo koonfur wax ay ku soo kordhineyso ayaaba iska yar.
Mida labaad oo ah halka uu ka dhacay dhibka ay inoo keeneen nimankan Dir Waqooyi ee naloo adeegsaday in lagu wiiqo awoodayada iyo miisaaniyada siyaasadeed oo aan ku yeelan laheyn koonfurta. Nimankan haddii ay huban yihiin magaca beesha reer isxaaq dee maba aheyn inay inaga ina soo horfariistaan oo ay nala gorgortamaan, balse waxay aheyd inay la gorgortamaan Soomali koonfur, balse waxay ku dhaceen dabin raqiis ah, ujeedadeeduna aheyd in miisaaniyada Dir koonfur lagu wiiqo.
Marka walaal hadalka waan ku dheeraaday ee waxaan ku soo gabagabeyn in haddii aanu nahay Dirta ku dhaqan koonfurta soomaliya aan aamin sanahay in dadka walaalahayaga ee ku dhaqan waqooyi ay sameyn KAREEN, welina sameyn KARAAN wax badan oo lagaga hortagayo siyaasadahan raqiiska ah ee uu shisheeyuhu ku doonayo in Dir koonfur awoodeeda lagu baaba'sho, idinkana qilaaf iyo kala qeybsanaan leydinku dhex abuuro. Haddaba hadalkeyga dhuux ina Yabaalow, shisheeyuhu wuxuu doonayaa inuu hal dhagax labo shimbirood oo isku meel ah ku wada dilo mar qura.
Inagana haddii aanu nahay Dir Koonfur halgan dheer ayaa ina sugayo, qaarkeena waa la heystaa (Dhulkii Biyamaal), inta kalena hareeraha laga fadhiyaa oo leysku dayey in la bara kiciyo dhowr jeer halka ay taasi u meel mari weydey qolyihii isku dayey taasna mahadeeda waxaa leh Alle(sw), iyo intii kaloo u hurtay naftooda, maalkooda, iyo caqligooduba.
Marka walaal doodu waa inoo furan tahay waxaana loo baahan yahay in Beeshan (Koonfur iyo Waqooyi) leysu soo dhaweeyo, iskaashi iyo ficil wax wada qabsina lagu dhaliyo.
Sabriye Faarax: Sweden
# posted by Dir Era @ 3:43 AM 0 comments
MA XAQBAA 4.5-KA AY SOOMALIDU WAX KU QAYBSATAY?
Inta aanan u galin falanqaynta su'aasha, waxay Soomalidu ku maahmaahdaa "Nin waalan tolkii baa u miyir qaba". Waxaan ugu socdaa anigu waxaan ahayn nin u dhashay beesha Isaaq(Habar Awal),ku dhashay kuna barbaaray magaalada Hargeysa,waxaan aad uga xumahay sida beesha aan ka soo jeedaa ugu wacad furtay wallaalahooda Dirta Koonfur,wakhti ay dadkaasi garab u baahneeyn si ay iskaga caabiyaan cadaawaha ku xeeran.
Sidaynu la wada socono kacdoonkii jabhadaha ee xukunkii hore lagu ridayay ee ay SNM hormoodka u ahayd iyo weliba shacabweynaha reer Sh.Isaxaaq,taageero hiil iyo hooba ah bay ka heleen wallaalahooda koonfur,ka dib markii xukunkii dhacay ee la soo golay wadanka gudihiisa ayaa halgankii oo dhan halkaas lagu joojiyay,iyadoo dhinac walba cadowgu ugu durdurinayo wallahood koonfur,xataa iska daa wax kaloo lama odhan waar umada sida halaga daayo waa tolkayo iska daa siyaasad iyo in loo hiiliyo oo lagu taageero aduun si ay cadowgooda iskaga celiyaan.
Arintiina waxay ku dambeysay waar dawlad baanu dhisanee idinka yeelkiin,arintaasina waxay meel ka dhac weyn ku tahay beelaha Dirta Koonfur,waxaanse lahayn iyana ragii iyo Duqeydii koonfur ee la xisaabtami lahayd islamar ahaantaana u gogal dhigan lahayd,taasina waxay dhalisay inay timaado su'aasha cinwaanka ah.
Taasi oo ka timi markay ragii sheeganayay Dirta waqooyi ay qaybtii dirta koonfur heli lahaayeen ay ku qabsadeen halkii ay mid taas leeg ay raadsan lahaayeen,anigoon soo gaabinaya waxaa la yaab leh waxaa is leeg Dirr koonfur iyo waqooyi,Daaroodka Somaliya gudaha ku jira ,Hawiye iyo Digil & Mirifle. Waar caqligaas nimanka dirta ah ee madasha fadhiyay ee aqbalay miyay jiranaayeen mise waxay ahaayeen la haystayaal.
Waxaan leeyahay waa magaca meel baa lagaga dhacay dirr ee ha la xaal mariyo,tuugta waqooyi ka timid ee hadana mar labaad tolkood lugta qabtayna waa in dhinac looga soo wada jeestaa,xaqa dadkan ka maqan iyo saamigoodii saxa ahaa la siiyee. Waxaan marnaba macquul ahayn dirr iyo Daarood baa isleeg inta Soomaaliya gudaha ku jirta never. Waxaan ka codsanayaa wallaahayga koonfur inay aqoonyahan, dhalinyaro, guurti iyo wadaadaba ay xisaabtan ugu yimaadaan waqooyi,si dhabana ula xisaabtamaan,si xal looga gaadho khilaafka iyo cuqdadan xun ee soo dhex gashay labada beelood. Allaa mahad leh Ahmed Yabaal
# posted by Dir Era @ 3:34 AM 0 comments